Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezihlukahlukene » UCycas ujabulile ngokungena eSwitzerland
I-Cycas Hospitality iyaqhubeka nokuqhubekisela phambili uhlelo lwayo lokukhulisa izifiso, njengoba le nyanga isayine ihhotela layo lokuqala laseSwitzerland.
I-Holiday Inn Express & Suites Sion enamagumbi angu-119 izosetshenziswa inkampani ewine umklomelo i-pan-European ngaphansi kwesivumelwano sayo sokuqala sokuqashisa neqembu lokutshalwa kwezimali le-Credit Suisse Asset Management.
I-Cycas kanye ne-IHG Hotels & Resorts zibambisene ukuze balethe umqondo wesibili we-Holiday Inn Express & Suites e-Switzerland.
Iphothifoliyo ye-Cycas manje ihlanganisa amazwe aseYurophu ayi-6 - iBelgium, iFrance, iJalimane, iNetherlands, iSwitzerland, ne-UK.
Lapho ivulwa ekwindla ka-2024, isakhiwo esisha sizohlinzeka ngenhlanganisela yamakamelo angama-95 e-Holiday Inn Express yakudala kanye nama-suites angama-24 anekhishi elincane ngasesiteshini sesitimela saseSion, kanye nendawo yokudlela ephansi ephansi ukuze isizakale ngendawo yayo ephilayo ngaphakathi new Cour de Gare kanye nehholo elisha lekhonsathi. Izivakashi zizokwazi futhi ukusizakala ngendawo yokuzivocavoca engu-24/7 kanye negumbi lomhlangano.
Ihhotela lizoba senkabeni yentuthuko enkulu yezentengiselwano okuhloswe ngayo ukusizakala esikhundleni se-Sion njengesizinda sezomnotho nezohwebo sesifunda futhi sixhumanise isikhungo sedolobha esishintshashintshayo nedolobha elidala.
Iphrojekthi entsha ye-Cour de Gare, eholwa yi-Comptoir Immobilier, izohlanganisa amahhovisi angaphezu kuka-10,300m², amafulethi angama-300 kanye nezindawo zokudayisa ezingu-5,700m². Inxanxathela izophinda ihlanganise nehholo lekhonsathi elikhulukazi nelenkomfa elikhulukazi esigodini sase-Valais - elixhunywe ehhotela - kanye nezindawo zokupaka izimoto ezingaphansi komhlaba zezimoto ezingama-625.
Ihhotela libekwe kahle futhi njengesikhungo socwaningo lwesayensi i-EPFL Valais Wallis - isikhungo sokwenza kahle esinabasebenzi abangaphezu kuka-400 - okuhlanganisa nekhempasi yaso ye-Energypolis School of Engineering.
Njengenhloko-dolobha yase-Valais - enye yezindawo zezivakashi ezidume kakhulu e-Switzerland - leli hhotela elisha lisendaweni ekahle ukuze lisebenzise izindawo zokungcebeleka eqhweni ezaziwa kakhulu zaseYurophu. I-Four Valleys, indawo enkulu yokushushuluza eqhweni yaseSwitzerland, okwamanje iyimizuzu engama-30 nje kuphela, kodwa ingase ifinyeleleke nakakhulu phakathi neminyaka embalwa yokuvulwa kwehhotela uma iphrojekthi entsha ehlongozwayo yemoto yamakhebula iqhubeka inikeza uxhumano oluqondile lwemizuzu engu-20 ukusuka esiteshini esingumakhelwane ukuya emithambekeni.
I-Sion iphinde ifinyelele ihora elilodwa eZermatt, Verbier, Chamonix Mont-Blanc nasePortes du Soleil. Iyindawo enkulu kunazo zonke exhumene eqhweni emhlabeni.